Posted by ကလိုစေးထူး at 10:46 PM
အတွေးစတွေကို လိုက်တွေးသွားတယ် ၃. ၄. ၆ လာဦးမှာလား.
ကိုစေးထူး ပိုစ်ကိုဖတ်ပြီးဘလောက်ရေးဘို့ စဉ်းစားနေတာအထမြောက်သွားတယ်။ လာဖတ်ပြီးလိုတာလေးတွေဝေဖန်ပေးပါအုံး
Sep 20, 2007, 5:09:00 AM